Warar sheegaya in afhayeenkii hore ee Al-shabaab uu isku soo dhiibi rabo maamulka Koonfur Galbeed – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Warar sheegaya in afhayeenkii hore ee Al-shabaab uu isku soo dhiibi rabo maamulka Koonfur Galbeed
Waxaa maalmihii ugu dambeysay soo baxaayay warar sheegaya in afhayeenkii hore ee Al-shabaab Sheekh Mukhtaar Roobow Cali Abuu Mansuur uu dhawaan isku soo dhiibi doonno maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya.
Ilo xog-ogaal ah aynu ka heleyno saraakiil ka tirsan maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa inoo xaqiijiyay in Sheekh Mukhtaar Roobow Cali Abuu Mansuur uu dhawaan lasoo xiriiray maamulkaas, islamarkaana uu ku wargeliyay inuu isa soo dhiibi doonno.
Dhinaca kale, wasiirka hub ka dhigista iyo dhaqanka celinta maamulka Koonfur Galbeed Soomaliya Xasan Maxamed Eeleey ayaa mar uu la hadlay warbaahinta ka sheegay in warkaasi uu jiro islamarkaana maalmaha soo socdo uu maamulkooda gacmo furan kusoo dhaweyn doonno afhayeenkii hore ee Al-shabaab Sheekh Mukhtaar Roobow Cali Abuu Mansuur.
Wasiirka ayaa sidoo kale sheegay in maalmihii ugu dambeysay uu wadahadalo u socday maamulka Koonfur Galbeed iyo Sheekh Mukhtaar Roobow, kaas oo ugu dambeyn la isku afgaratay qaabka iyo xilliga uu qorsheeynayo inuu isa soo dhiibo.
Inkastoo aan la ogeyn xilliga rasmiga uu isa soo dhiibi doonno ayaa hadane waxaa la sheegayaa in Sheekh Mukhtaar Roobow uu haatan ku dhuumaaleysanayo qeybo ka mid ah gobolada Bay iyo Bakool, iyadoona aan la garanayn goobta rasmiga ah uu ku sugan yahay.
Si kastaba ha ahaatee, arrintaan ayaa kusoo beegmaysa xilli dhawaan labo sarkaal oo ka tirsanaa Xarakada Al-shabaab ay isku soo dhiibeen maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya, kuwaas oo sheegay inay maamulkaasi la shaqeyn doonaan.